Seychelles Secretary Secretary for Tourism inopa zvakakosha mubazi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Secretary Secretary for Tourism inopa zvakakosha mubazi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • nhau • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Seychelles Munyori Mukuru Wekushanya
Vachipinda pabasa ravo nyowani seSechelleles Secretary of Tourism, Mai Sherin Francis vakasangana nevatori venhau veko kuBotanical House neChitatu, Chikumi 30, kuti vape zvinangwa zvebazi muindasitiri yezvekushanya uye kuti vakurukure nezve shanduko mubazi uye mashandiro ayo. .
Dhipatimendi rinozodaidzwa kunzi Tourism Seychelles nekuda kwezvikonzero zvekushambadzira zvakazivisa Seychelles Secretary Secretary we Tourism.
Zvikamu zvitatu zvikuru zvinoumba hurumende yeHurumende yeHurumende.
Iko kutarisisa kwehutongi hutsva kunenge kuri kuwedzera kugutsikana kwevatengi nekunatsiridza rutsigiro rwayo kune yekufambisa neyekushanya indasitiri.
Mai Francis vakataura shanduko dziri kuitika mukati meindasitiri yezvekushanya hadzikanganise zita reSychelles asi kuti nekuda kwezvikonzero zvekutengesa, iro dhipatimendi richazonzi Tourism Seychelles.
Vachipa shanduko dzakakosha kwazvo, Secretary-Secretary akaona kuti parutivi pevanyori vake, vanove vanoona nezve PR uye Kutaurirana neInternational Cooperation, iro Dhipatimendi rezveKushanya rinenge riine zvikamu zvikuru zvitatu.
Akatsanangura kuti zvikamu zviviri zvikuru zvebazi, zvinosanganisira Destination Marketing Division uye Destination Planning uye Development Division, zvinowirirana mumabasa avo.
Kupa nzwisiso yezvakakosha iro dhipatimendi idzva raizove rinotarisa, Mai Francis akataura kuti zvirongwa zvese zviri kuitwa tichitarisa nguva yakaoma iyo indasitiri iri kusangana nayo. Zvinoenderana nekugadziriswazve, chakakosha ndechekutarisa nzvimbo idzo dhipatimendi dzinogona kuenzanisa zviwanikwa nenzira kwayo uye nekuona kushanda kwadzo kwese kwese kwayinoita maererano nesisitimu yehutongi.
Iyo tarisiro yehutungamiriri hutsva ichave yekuwedzera kugutsikana kwevatengi nekunatsiridza rutsigiro rwayo kune indasitiri kuburikidza nekudzidziswa uye zvimwe zvirongwa kubatsira kusimudzira zviyero zvebasa.
Imwe nzvimbo yekutarisisa ichave iri kugadzirisa makakatanwa mumitemo iripo yekushanya kana marongero. Kuongororwa kwemitemo yezvekushanya kune akasiyana masevhisi muchikamu ichi kuchaitwa, PS Francis akadaro, kuona kuti marongero ese achapa zvido zvazvino, kunyanya tichifunga nezve denda uye nyowani yekushanya inovandudza mamiriro. Sekureva kwaAmai Francis, izvi zvakakosha kuita kuti kusiyaniswa kwezvigadzirwa zvedu.
Nekuona kwekuzvipira kwedhipatimendi kusimudzira ruzivo rwevatengi, iyo PS yeZvekushanya yakataura kuti dhipatimendi richaita hesera yezvivakwa uye masevhisi anopihwa vashanyi muSychelles kunyanya maererano nezvinokwezva, nzvimbo, uye zviitiko. Chiitwa ichi chichaitwa pamwe nekubatana nevatambi vakasiyana siyana uye vanozoona kuwanikwa uye mhando yezvivakwa zvevashanyi nemasevhisi.
Izvi zvinotibvumidza kuti tizive paine maburi kuitira kuti isu tivandudze mhando yezvigadzirwa zvedu zvekushanya izvo zvinozotibvumidza kuwedzera nzvimbo yekutengesa kwekuenda, ruzivo rwevaenzi uye kugadzira mari. Izvi zvaizotibatsirawo kuona nzvimbo dzinogona kukura kweSevhisi inopihwa vashanyi uye kutibatsira zvirinani kuisira mari muindastiri.
Vachipa nzvimbo yakakosha yekushushikana, Mai Francis vakaraira kuti paitwe ongororo kuti vanzwisise nyaya dzakakosha dzevashandi dzakatarisana iyo yekushanya chikamu muSychelles. Dhipatimendi richange richishanda pamwe nekudyidzana nebazi rakakosha kuti vaone chinokonzera kuwanda kwevashandi pamwe nekushomeka kwechigadzirwa nedonzvo rekugadzirisa matanho ekugadzirisa.
Dhipatimendi richaenderera mberi nekuedza kwaro kuenderera mberi nekuziva nezve brand, kubatana kwedhijitari nekusimbisa kuvapo kweSychelles pasocial media, PS Francis akayambira, nepo ichisimbisa kuti kutariswa kwakanyanya kuchabhadharwa kumisika yehungwaru, manhamba uye ruzivo rwunotungamirwa nedata.
Mukuvhara PS Francis akataura kuti kunyatsoona marongero acho kune nzvimbo dzinoverengeka dzakakosha dzekudyidzana dzinofanira kuchengetedzwa nekutsigirwa kubva kune vega kusvika kuruzhinji. Kuenderera mberi kwekushandira pamwe nekutaurirana nemimwe mitumbi yehurumende kubva mukutonga kusvika pakuumbwa kwemitemo kwakakosha, kuona kuti mabasa ese anobatsira kana masevhisi ekufambisa indasitiri anoenderana.